महावीर पुनको गुनासो : सरकारले गफाडीको रुपमा बुझ्यो ! « Tulsipur Khabar
महावीर पुनको गुनासो : सरकारले गफाडीको रुपमा बुझ्यो !
तुलसीपुर, वैशाख १६ ।
प्रसिद्ध म्यागासेसे पुरस्कार प्राप्त आविष्कारक महावीर पुनले आफुलाई सरकारले गफाडीको रुपमा बुझेको गुनासो गरेका छन् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले तुलसीपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै सूचना र प्रविधिको रुपमा कम ज्ञान भएकाले नै आफुलाई गफाडीका रुपमा हेरेको उनले बताए । स्थानीय तह देखि प्रधानमन्त्रीसम्म सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्नेमा कन्जुस्याँई गरेको भन्दै उनले भौतिक विकासले मात्रै समृद्धिको परिकल्पाना गर्न नसकिने बताए ।
७ साल पछिका राजा र नेताले प्रविधिको विकासका लागि ढलेको सिन्को समेत नउठाएको बताउदै राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका पुनले प्रतिभा भएका युवालाई स्वदेशमै बस्ने वातावरण सृजना गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।कार्यक्रममा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख घनश्याम पाण्डेले यसै वर्षबाट स्मार्ट हेल्थ कार्यक्रम सञ्चालन हुने वताउँदै प्रविधिको विकासलाई पनि उपमहानगरपालिकाले प्राथमिकता दिने वताए ।
उनले आविष्कारक महावीर पुनसँग तुलसीपुरको प्राविधिक विकासका लागि काम गर्ने कुरा भइसकेको वताए । “तुलसीपुरको शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रलाई प्रविधिसँग जोडेर काम गर्नका लागि हामीले प्रयास गरिरहेका छौ ” पाण्डेले भने । उनले वार्षिक रुपमा प्रविधिको विकासका लागि उपमहानगरले निरन्तर वजेट छुट्याउने समेत वताए ।